Global Voices teny Malagasy » Tsy laitran-doza ve ny ao Karaiba? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Janoary 2020 5:06 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika avylavitra
Sokajy: Karaiba, Bahamas, Barbady, Jamaika, Kiobà, Trinite sy Tobago, Mediam-bahoaka, Siansa, Tontolo_iainana, Voina
Nosy kely iray ao Bahamas. Photo by John Hilliard on Flickr, CC BY 2.0.
Anatin'ny iray amin'ireo tantara tena hafahafa mila zaraina anaty tambajotra sôsialy ao Karaiba ety am-piandohan'ny taona 2020, lazain’ ny The Sun , gazety iray mpisary adala ao UK (Fanjakàna Mitambatra) fa “niasa nikaroka izay toerana azo antoka indrindra ho anareo ireo mpahay siansa raha toa ka misy zava-mihanaka erantany mananontanona ny hamongotra ny zanak'olombelona.”
Rehefa nojerena, maro amin'ireny toerana lazaina fa azo antoka ireny no fanjakana nosy, ka ny dimy amin'ireo 20 lohalaharana amin'izany dia any Karaiba avokoa. Ny firenena mitàna ny toerana ambony indrindra ao amin'ny faritra dia Bahamas — mahatsikaiky, mbola tsy afaka ny alok'ireo dona noho ny loza voajanahary nanjo azy, ny Tafiotra Mahery Dorian  — manaraka azy avy eo i Trinidad sy Tobago eo amin'ny Laharana faha-8, Barbados, Laharana faha-9, Cuba, faha-11, ary Jamaika no farany ao amin'ny Laharana faha-18.
Na izany aza dia mitandrina fatratra ilay lahatsoratra milaza fa ankoatra ireo telo voalohany (Aostralia, New Zealand sy Iceland), misy ireo firenena hafa “nalahatra ho latsaky ny 0.5, izany hoe tsy azo antoka loatra hiarovana ny fitohizan'ny fahaveloman'ny zanak'olombelona.” Mampalahelo, mbola miady amin'ny doroala mandreraka  i Aostralia ilay laharana voalohany , efa hatramin'ny Jona 2019, araka izany na dia heverina ho manome fialofana ho amin'ny andro farany aza ilay kaontinanta — mampisalasala raha ny firaketana momba ny fifindràmonina  ao aminy — dia feno ankehitriny ny kapoakany (sady, izay indrindra, samy ilainy na ny fitserana na ny fanampiana iraisampirenena).
Ny sasantsasany amin'ireo toetra mampiavaka izay anisan'ny tafiditra tamin'ny nanomezana ireo isa farany dia ireo zavatra toy ny “toerana voajanahary misy azy, ny loharanonkarena natoraly ary ny firindràna ara-politika.”
Gaga tamin'ilay fandinihana ny ankamaroan'ireo olompirenena any Karaiba, fandalinana izay nandaharana ireo firenena araka ny “fahafahany misoroka valanaretina avy any amin'ny faritra hafa.” Mazava tsara fa ny filôzôfia hoe “tsy misy olona atao ho nosy” dia tsy misy lanjany mavesatra rehefa ny fara-andro no resahana — rehefa tonga ny fitsaràna farany, raha ny fijery azy, aminà nosy iray no tianao hisy anao. Kanefa, ny sary arahan-tarehimarika manaingo ilay lahatsoratra dia tsy manampy mihitsy hanana fahatokiana amin'ireo vokatra navoakany, i Cap Vert somary toa any avaratra kokoa noho izay tena misy azy amin'izao fotoana izao sy Madagasikara mipoitra in-droa — indray mandeha ery amin'ny morontsirak'i Brezila.
Matt Boyd sy Nick Wilson no nitarika ilay fikarohana, izay navoaka voalohany tao anatin'ilay gazety iraisampirenena Risk Analysis .
Wilson, mpitsabo amin'ny sehatry ny fahasalamambahoaka ao amin'ny Anjerimanontolon'i Otago ao New Zealand, dia nanosoka hevitra hoe mety hitondra hankany amin'ny valanaretina nokirakiraina ara-tarazo ka hanjary ho loza manantontanona ny fitohizan'ain'ny zanak'olombelona ireo zavabaovao hitan'ny biotechnologie. “Satria afaka mandingana mora foana ireo sisintany ry zareo mitondra / miaina miaraka amin'ilay aretina,” hoy izy tamin'ny The Sun, “azon'ny nosy iray mikatona ho an'ny tenany, sy mahavita tena ny mampiantrano olona mitokamonina sy mahafehy ny teknolojia, izay afaka indray hameno ny tany aorian'ny fitrangan'ny loza mahatsiravina eto ambonin'ny tany.”
Ireo firenena manana ny fiandrianany neken'ny Firenena Mikambana ihany no nalahatr'ilay fandalinana, dia ireo izay manana mponina mihoatra ny 250.000 satria, araka ny lazain'i Wilson, raha afaka ny ho tafavoaka velona ireo nosy kely, tsy mila ny fanampiana aorian'ny apôkalipsa, vinavinain'ireo mpikaroka hoe “ilaina ihany ireo karazana manmpahaizana manokana amin'ny sehatra teknika isankarazany eo amin'ny nosy iray mba hahafahana manangana indray ny taranak'olombelona.”
Raha tahaka izay, ireo firenena manana tarehimarika ambony amin'ny harinkareny faobe, manana tahirin-tsakafo maharitra sy famokarana angovo tsara, no mahazo vokatra tsara, na dia eken'ireo mpikaroka aza fa hoe “mety ho tsy tonga tafatra ny fomba nanaovan-dry zareo ny fandalinany”. Tsy noheverin-dry zareo, ohatra, ireo fiantraikan'ny fiovaovàn'ny toetrandro, izay ireo fanjakana nosy no tena itataovany betsaka .
Ho an'ireo marobe mpampiasa aterineto ao amin'ny faritra, tsy hoe fotsiny vao mainka manamafy ny fahavononan-dry zareo miaina ao amin'ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra eto an-tany ireo vokatra avy amin'ilay fandalinana, fa tsy mihevitra ihany koa ny hiala ao ry zareo, na eo aza ny haavo mahafaty hita amin'ny kolikoly  sy ny heloka bevava . Ny sasany nahita ireo vokatra ho somary voahevitra tsara ihany, raha ny marina, ary nanosoka hevitra hoe ireo firenena afaka ny hamaly ny filàn-dry zareo manokana ara-tsakafo sy angovo no tokony nalahatra ho amin'ny toerana 5 voalohany amin'ireo toerana afaka hiatrika ny zava-doza tahaka izany.
Ny hafa nahita fa zavatra mampihomehy ny hoe indray andro any, mba ho tafavoaka velona amin'ny karazana loza apôkaliptika iray mamely ny erantany, ny valanaretina sy viriosy, dia handadilady ho any amin'ny tapany Atsimon'izao tontolo izao ry zareo avy any Avaratra, hiteny hoe , “Tsia, tsia, tsia. Mila miaro ny lava-boalavontsika (na faritra mahantra) isika.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/01/12/146512/
 The Sun: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sun_(United_Kingdom)
 ny Tafiotra Mahery Dorian: https://globalvoices.org/2019/09/03/as-hurricane-dorian-devastates-the-bahamas-a-cry-for-the-caribbean-to-face-up-to-the-climate-crisis/
 doroala mandreraka: https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_Australian_bushfire_season
 tena itataovany betsaka: https://globalvoices.org/2019/10/02/the-caribbean-speaks-out-on-the-climate-crisis/
 heloka bevava: https://globalvoices.org/2017/09/05/jamaicas-new-anti-crime-strategy-gets-a-cautious-thumbs-up-at-least-for-now/
 hiteny hoe: https://www.facebook.com/keithos868/posts/10163381196265500?comment_id=10163382845920500